Ny fomba fiasan'ny kamiao ny fiasanao
Ahoana no fiasan'ny brake calipers
Toy ny fiara-mijery lavitra ny fiara misy anao, misy fiasa fototra vitsivitsy ny fiara misy anao: mandroso mandroso sy mihemotra, miankavia miankavanana ary zahao. Mazava ho azy, ny fanakanana fiara iray-ton-plus iray dia mitaky mihoatra lavitra noho ny famelana fotsiny ny fantsom-pandehanana, ary ny famelezana azy amin'ny an-damosiny dia mety handrava ny fifindrana. Ny fiarovan-tenan'ny fiaranao dia lasa lavitra noho i Bertha Benz , vadin'i Karl Benz, nanamboatra takelaka breziliana tamin'ny taona 1886.
Misy karazana fihenam-bidy roa: antontan-tsakram-po sy tamboho . Ny fantsom-panomezana fiara dia teknôlôjia tranainy, tsy mahery vaika na mahomby, fa mbola ampiasaina amin'ny fampiharana sasantsasany satria mora kokoa ny vokatra ary tsara ho an'ny fiara an-trano amin'ny ankamaroan'ny fiara. Ny takelaka disc dia teknôlôjia vaovao kokoa, tsara kokoa noho ny ala-drom-barotra amin'ny fomba rehetra, fa koa lafo kokoa amin'ny famokarana sy fitanana.
Inona no sakana?
Inona marina moa ny fiarovan-danja, na izany aza ?. http://www.gettyimages.com/license/172252488
Ny rafitra fandraketana disk dia misy ampahany fototra vitsivitsy, anisan'izany ny tadin-tsambikin-tsoavam-bahoakany, ny rotorotom-bolana, ny brakon-tsakafo, ary ny fantsom-bokatra, ny loharano ary ny clips mba hitazonana ireo pads. Ny fihoaram-bolo , na fihenam-bidy, no mitazona eo anelanelan'ny kodiarana sy ny tohodran-tsoroka, miodina amin'ny axe sy ny kodiarana. Ny tombo-kase dia afenina amin'ny lamosina na ny fihantsanana. Ny fihazonana ilay rotoro, ny tsindrin-tsakafo dia afaka mampihena ny haavon'ny kodiavin'ny haingam-pandeha na ny fampiatoana, izany hoe, zero - bebe kokoa ao anatin'ny iray minitra.
Ny tadin-tsoavelona dia tonga amin'ny karazana fototra roa, ny fikorianam-bolo mifatotra sy ny sifodran-tsavoka. Voatondro mivantana eo amin'ny fetsy ny tsipika mivaivay mifamatotra, ary ao anatiny ny faritra mihetsiketsika rehetra. Ao anatin'ilay sakana misy tsipìka mipetaka mafy dia manempotra ny pistons roa na efatra amin'ny pistons, izay misisika amin'ny tsipika, avy amin'ny andaniny roa. Tsy mandeha mivantana eo amin'ny fehikibo ny tetezana entona mandatsa-bolo, fa amin'ny "tranom-bahiny". Ny tranom-paty dia mitazona ny valan-dresaka, amin'ny ankapobeny amin'ny làlam-paingotra, ary ny tsindry masira mamakivaky azy ireo, miorina amin'ny basy. Ao anatin 'ny teboka fandoroana efitrefitra dia iray na roa ny vavahady eo anelanelany.
Ahoana ny fomba fiasan'ny brake calipers?
Diagram fototra momba ny fiasan-tsakafo. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydraulic_disc_brake_diagram.gif
Amin'ny sehatr'izy ireo, ny tonta brekera dia fitaovana fampitomboana hery. Mandrosoa eo amin'ny famakiana ny kitron-tsoavaly ary ny pistole kely dia manempotra ny tsiranoka entina ao anaty milina cylinder . Satria tsy mitsimoka ny tavy, dia atodika avy hatrany amin'ny hery mavesatra ny hery. Ao anatin'ilay tsindrin-tsakafon'ny takela-by, ny pistons lehibe dia mampitombo ny hery ampiasaina, manosika ny valin-dresaka ho an'ny valala.
Amin'ny tratran'ny fihoaran-tsompitra mipetaka, ireo mpanao pistola dia mitsambikina avy amin'ny andaniny roa. Raha toa ka mipoitra ny tsipìka mipoitra, dia manosika voalohany eo amin'ny takela-penitra ny sifotra, ary manosika ny tadiny hiala amin'ny rotoro, ka mahatonga ny brakon-tsetroka ho any amin'ny rivotra. Ny fanindron'ny tsindry dia mamela izany hetsika izany.
Ahoana no nahadiso ny tsatokazo?
Ny fihazakazak'ilay fiarovan-tsoroka hikirakirana na ny entana mavesatra dia mety hitarika ho amin'ny fampakarana. http://www.gettyimages.com/license/184974687
Ny lanjan'ny tsipika matevina dia lafo kokoa, nefa koa azo antoka kokoa sy azo itokisana kokoa, raha toa ka azo itokisana tanteraka ny vidin'ny famokarana mahavelona, ​​raha toa ka mahavidy ny vidin'ny famokarana. Na izany aza, dia mety tsy hahomby amin'ny tsindry vitsivitsy ny tetezana. Ireto misy ny tsy fahombiazan'ny fihoaram-pefy mahazatra sy ny fomba hamahana azy ireo.
Kofehy kofehy mofomamy: Amin'ny tondra-drano mitsingevana, ny kodiarana vy lehibe dia ny rohy malemy indrindra ary miteraka olana maro. Ny akanjo am-bava eo amin'ny takela-by anaty dia mahazatra, saingy mampihendanja ilay olana ny tsindry mafy. Raha toa ka tsy afaka misintona malalaka ny tadin-tseranana, dia mety hitarika kokoa amin'ny kibay anaty izy io, ny fanindriana ny takela-by ivelany, na ny fihenan-tsakafon'ny tsimokaretina, ary tsy hikorontana velively eo amin'ny takela-by ivelany. Raha toa ka mihazona ny iray amin'ireo gidro, dia mety hitarika amin'ny fahatsapana fihenam-bidy izany, toy ny fihoaran-tsakafon'ny tsindry miezaka ny hifandray tanteraka amin'ny rotor.
Esory amin'ny tadiny na biriky ny kodiarana ary manindrona menaka matevina. Atsaharo ny bootitra vita amin'ny ravina na ritra mba hisorohana ny fidirana ao anaty rano sy ny fahasimbana.
Mpanjono miparitaka: Ao amin'ny tifitra matevina na misidina, ny mpanao pistôna tsirairay dia manana tombo-kase ho an'ny gilasy, izay mihazona ny tsindry mavesatra ary mampihemotra kely ny famoahana azy amin'ny famoahana azy. Ny boatin-tsoavaly ivelany dia mitazona rano sy vovoka amin'ny lavaka fantsona. Noho ny taonany na ny fomba fanaovan-tsakafo tsy mety, ny vovo-basy vovoka dia afaka mamela ny rano sy ny vovoka ho any amin'ny vavon-tsolika, miteraka karajia. Raha mandalo io lelafo io ny tombo-kase, dia mety ho simba sy haka.
Hamarino fa ny teboka vovoka dia nofehezina, tsy voaaro, ary maina. Aza mampiasa menaka silika ao amin'io faritra io, satria tsy mifanentana amin'ny fluid-dresaka. Raha manamboatra tapa-bolana ny tetezana, aza hadinoina ny manamboatra lavaka fantsona, manadio ny rehetra, manolo ny tombo-kase, ary mametraka ny boots rehetra. Ampiasao ranon-tsavoka vaovao mba hanamboarana tombo-kase ho an'ny fametrahana.
Fikojakojana takotra fandrakofana: Misy ny fifamoivoizana eo anelanelan'ny valantserina sy ny fihazonana fitaovana. Izany dia mitazona ny zavatra tsy mitsipaka sy mampihoraka. Ny fihenanam-bidy koa dia mahatonga ny fihenanam-bidy mahomby kokoa. Rehefa afaka fotoana fohy, dia mety hampihena io fahafahana io ny korontana, ka miteraka ny zana-kisoa hikendrena na hifikitra. Ny tebiteby fandrika dia mety hitifitra ny rotorazo na tsy hiditra amin'ny rivotra, hitarika amin'ny akanjo simba, hafanana ary tsy mahomby. Ny fametahana kofehy hafahafa dia afaka manisy tsindrim-peo mifototra amin'ny fomba fahatsapany sy ny asany.
Rehefa manao fanatanjahan-tena ianao , dia ataovy izay hanadiovana ny voka-dratsiny rehetra ary esory ny vovo-dronono sy ny fanangonam-bola. Aza adino ny manadio ao ambadiky ny clips sy ny loharano. Ny habetsaky ny fanosihosena ny fanoherana dia hiaro lamasinina sy tsipika avy amin'ny korontana, na dia loko kokoa aza ny loko.
Na dia misy ihany aza ny ampahany vitsivitsy amin'ny fiaranao, ny tifon'ny valifaty dia iray amin'ireo tena manakiana mafy indrindra, ka mamela ny fifandirana amin'ny toe-javatra samihafa. Ny fahafantarana ny fomba fiasan'izy ireo sy ny fomba ifehezan'izy ireo dia manampy anao handray fanapahan-kevitra tsara momba ny fikojakojana sy ny fanamboarana azy, na mikaroka mpiasa matihanina ianao na manao izany. Rehefa tonga eo amin'ny tsipika mipoitra, dia diniho hatrany ny zava-drehetra, ary mitandrema amin'ny feo tsy mahazatra alohan'ny ahatongavan'ny toe-javatra tsy azo antoka.
Fitaovana fiofanana amin'ny ordinatera: Ratchet Extensions
Ny fiara tsy mivoaha voalohany voalohany
Ireo karazana fiara misy fiara 3
Vehivavy afaka azonao ary tsy afaka manilika 4 Kodiarana
Manamboara kodiarana mifanaingina amin'ny Can
11 Mipoitra ny fitaovana sy ny fomba hamahana azy ireny
5 Antony fa mila fiara manamboatra fiara tena izy
Fandefasana marika tsy tapaka
Famaritana ny OHV
Tsidiho ny Haumea Planeta Dwarf
Ireo Shadow People Encounters - Tantara Marina
Olona malaza amin'ny loko malaza
Hillary Clinton momba ny fifindra-monina
Fantaro ny fomba hanamboarana bokotra Sinoa iray
Todo sobre visitar a Unidos como turista
Ny tantaran'ny Internet
Teny tsy voafaritra mazava: mazava sy tsy misy dikany
Fantaro ny Planet Venus
Jeografia ao amin'ny faritanin'i Sichuan, Sina
Inona no atao hoe fizarana katsaka?
Ny fifandraisana amin'i Etazonia amin'i Rosia
809 Code Code Scam
Inona no atao hoe technique chimique? Inona no ataon'ny mpanamboatra simika?
Listens Chalisa sy Song Aarti Notokanana ho an'i Hanuman
Torolalana ho an'ny mari-pahaizana matematika tsirairay sy ny toetrany
30 Teny nalaina tamin'ny fanambadiana
Ny famaritana ny Mezuzah
Mandehana miaraka amin'i Pa'lante
Ahoana no ahatongavanao ny kofehy?
Fihetseham-pandrenesana avy amin'ny rakitra US Census Pre-1850
Ny adihevitra momba ny Anjerimanontolon'i Belhaven
Zavatra Idikan'ny LDS: Hollywood Square
Ny Golf Breakers: Big 6 Big Break Alums